Thu, Jul 2, 2020 at 12:16pm
क्रिस्टियानो रोनाल्डोले जिते पाँचौं बेलन डे’अर
मंसिर २२, काठमाडौँ । पोर्चुगाल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले उत्कृष्ट फुटबल खेलाडीका रूपमा पाँचौंपल्ट बेलन डे’अर अवार्ड जितेका छन् । रियल म्याड्रिड फरवार्ड रोनाल्डोले यस उपलब्धिसँगै पाँचौं पल्ट बेलन डे’अर जितेका बार्सिलोनाका अर्जेन्टिनी लियोनल मेसीको बराबरी गरेका हुन् । यसपल्टको अवार्डमा मेसी दोस्रो तथा नेयमार तेस्रो स्थानमा रहे । ‘ म निश्चित रूपमा खुसी छु, प्रत्येक वर्ष यस्तै होस भन्ने इच्छा पनि छ,’..
विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा नेपालद्वारा यूएईसामु २२२ रनको लक्ष्य प्रस्तुत
काठमाडौं, मंसिर २० । विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा नेपालले यूएईसामु २ सय २२ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । आबुधाबीस्थित शेख जियाद अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालले निर्धारित ओभरमा ६ विकेटको क्षतिमा २ सय २१ रन वनाएको छ । सरद भेषावकर ८१ रनमा नटआउट रहे । ५ चौका प्रहार गरेका उनले ९५ वलको सामना गरे ।उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल..
म्यान्चेस्टर युनाईटेड, बार्सीलोना, युभेन्टस र बायर्न म्युनिख विजयी
काठमाडौं, मंसिर २० । युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत गएराती भएका खेलहरुमा म्यान्चेस्टर युनाईटेड, बार्सीलोना, युभेन्टस र बायर्न म्युनिख विजयी भएका छन् । समुह ए को खेलमा इंग्लीश क्लव म्यान्चेस्टर युनाईटेडले रुसको सि.एस.के.ए. मस्कोलाई २–१ ले हराँउदा स्विट्जरल्याण्डको एफ.सी बाजलले पोर्चुगलको बेनिफिकालाई २–० ले पराजित गरेको छ ।्यसैगरी समुह बी का खेलहरुमा जर्मनीको बायर्न म्युनिखले फ्रान्सको पेरिस सेन्ट जर्मेनलाई ३–१ ले..
रुसले विन्टर ओलम्पिक खेल्न नपाउने, प्रतिबन्ध कायमै
एजेन्सी, मंसिर २० । रुसले आगामी वर्ष हुने विन्टर ओलम्पिक खेल्न नपाउने भएको छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटि (आइओसी) ले रुसलाई आगामी वर्ष हुने विन्टर ओलम्पिकमा सहभागी हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । आइओसीको हेडक्वाटर स्वीट्जरल्याण्डको लाउसान्नेमा भएको विशेष बैठकले विन्टर ओलम्पिकमा रुसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । तर डोपिङमा दोषी नपाइएका रुसी खेलाडीले भने स्वतन्त्र झण्डा लिएर दक्षिण..
एजेन्सी, मंसिर १९ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटि आईओसीको वैठक स्विट्जरल्याण्डमा आज साँझ बस्दैछ । वैठकले रुसलाई आसन्न विन्टर ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउन दिने कि नदिने भन्नेमा निर्णय गर्ने बताइएको छ । चार वर्षअघि रुसकै सोचीमा आयोजना गरिएको विन्टर ओलम्पिकको क्रममा रुसी खेलाडीलाई राज्यस्तरबाटै प्रतिबन्धित औषधि प्रयोग गराईएको र डोपिङ परिक्षणमा समेत प्रमाण नष्ट गरिएको पाईएको थियो । त्यही कसूरमा रुसलाई गत वर्ष ब्राजिलमा सम्पन्न..
इङ्गलिश प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर युनाइटेडको १३ औं जीत
काठमाडौ १८ मंसिर । वेष्ट ह्याम युनाईटेडलाई २–१ ले पराजित गर्दै म्यान्चेस्टर सिटीले इङ्गलिश प्रिमियर लिग फुटबलमा लगातार १३ औं जित दर्ता गराएको छ । गएराति घरेलु मैदानमा भएको खेलमा म्यानचेस्टर सिटीविरुद्ध वेष्ट ह्यामका एन्जेलो ओग्बोनाले पहिलो गोल गरे । तर, दोस्रो हाफमा सिटीका निकोलास ओटामेण्डी र डेभिड सिल्भाले एक–एक गोल गर्दै टोलीको जित सुनिश्चित गरे । जितसँगै अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको..
अभ्यास खेलमा नेपालद्वारा केन्या ६ विकेटले पराजित
काठमाडौं, मंसिर १७। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि खेलेको अभ्यास खेलमा नेपालले केन्यालाई ६ विकेटले पराजित गरेको छ । केन्याले दिएको १ सय ११ रनको लक्ष्य नेपालले ४ विकेटको क्षतिमा भेट्टाएको हो । टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको केन्याले ३२ ओभरमा ९ विकेटको क्षतिमा १ सय १० रन बनाएको थियो । नेपालका ललित भण्डारीले चार, आरिफ शेखले दुई तथा करण केसी,..
इंग्लिश प्रिमियर लिगमा आज राति दुइ खेल हुदै
एजेन्सी, मंसिर १७ । इंग्लिश प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत आज राति दुइ खेल हुदै छन् । आइतबारराति हुने पहिलो खेलमा शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटी र वेष्ट ह्याम यूनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । दोस्रो खेलमा बर्नमाउथ र साउथह्याम्पटन आमनेसामने हुनेछन् । यसअघि गएराति भएको खेलमा म्यान्चेस्टर युनाईटेडले आर्सनललाई ३–१ गोल अन्तरले पराजित गरेको छ । आर्सनलको मैदानमा भएको खेलमा म्यानचेस्टर युनाईटेडलाई विजयी गराउन जेस्सी..
आहा रारा फुटबल प्रतियोगिता माघ ९ देखि शुरु हुने
पोखरा, १७ मंसिर । रारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता माघ ९ देखि २० गतेसम्म पोखरा रंगशालामा सञ्चालन हुने भएको छ । सहारा क्लबद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मोफसलको बहुप्रतिष्ठित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा विदेशी ‘ए’ डिभिजनका क्लब, पूर्व–पश्चिम क्षेत्रबाट एक-एक तथा आयोजक सहारा क्लबसहित १२ टिमको सहभागिता रहने जानकारी दिइयो । “खेलकुदको विकासमा सहकार्य गरौं, पोखरालाई खेलकुद पर्यटन सहरकोरुपमा स्थापित गरौं”..
डब्लुसिएल खेल्न युएईमा रहेको नेपाली टोली अभ्यास खेलमा अमेरिकासँग पराजित
काठमाडौं मंसिर १५ । वर्ल्ड क्रिकेट लिग (डब्लुसिएल) च्याम्पियनसिप खेल्न युएईमा रहेको नेपाली क्रिकेट टोली अभ्यास खेलमा अमेरिकासँग ५ विकेटले पराजित भएको छ। नेपालले दिएको ९० रनको सामान्य लक्ष्य अमेरिकाले २२.३ ओभरमा ५ विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। नेपाली टोलीका पूर्व प्रशिक्षक पुवुदु दासानायकेको टिम विरुद्व नेपालको ब्याटिङ निकै फितलो रह्यो। युएईको अबुधावीमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले पूरा ओभरसमेत खेल्न सकेन..
काँकडभिट्टा गोल्डकपमा आज उपाधि भिडन्त हुदै, विजेताले ८ लाख प्राप्त गर्ने
झापा, मंसिर १५ । झापामा जारी काँकडभिट्टा गोल्डकप फुटबलमा आज उपाधि भिडन्त हुदै छ । उपाधिका लागि आज मनाङ मस्र्याङदी क्लव र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबबिच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । उपाधि आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउका साथ मैदान उत्रने यी दुइ टोली बीचको खेल अपरान्ह तीनबजे पछि सुरु हुनेछ । मनाङ आजको खेलमा एकहप्ता अघि आर्मीसँगको हारको बदला लिने दाउमा हुनेछ । आर्मीले पुलिसलाई..
काठमाडौं, मंसिर १५ । रुसमा अर्को वर्ष हुने विश्वकप फुटबलको खेल तालिका आज सार्वजनिक गरिंदैछ । रुसको मस्कोमा आज साँझ हुने एक विशेष समारोहमा विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले विश्वकप फुटबलको समूह विभाजन र खेल तालिका सार्वजनिक गर्न लागको हो । यसका लागि विश्वकपमा छनौट भएका सबै ३२ राष्ट्रका फुटबल संघ र टोलीका प्रतिनिधि मस्को पुगिसकेका छन् । सहभागी ३२ राष्ट्रलाई फिफा वरियताको..
पुस ३ देखि एभरेष्ट प्रिमियर लिग शुरु हुने
काठमाडौँ, १४ मंसिर । सर्वाधिक पुरस्कार राशिको एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपिएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका आज सार्वजनिक भएको छ । खेल तालिकानुसार आगामी पुस ३ देखि १५ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त प्रतियोगिताका खेल कीर्तिपुरस्थित त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा हुनेछ । प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा काठमाडौँ किंग्स इलेभेन र ललितपुर पाट्रिओट्सबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । प्रतियोगितामा छ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । काठमाडौँको किंग्स इलेभेन, ललितपुरको पाट्रिओट्स,..
भोलिबाट मोदी नदीमा कायाकिङ प्रतियोगिता शुरु हुने
१४ मंसिर, पोखरा । कास्कीको मोदी नदीमा कायाकिङ प्रतियोगिता हुने भएको छ । कास्कीको मोदी नदीको करिव ३ सय मिटर क्षेत्रमा प्रतियोगिता हुन लागेको हो । नेपाल कायक एण्ड क्यानोन क्लब र विरेठाँटी क्यानोनिङको सयुक्त आयोजनामा मंसिर १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म हुने प्रतियोगीतामा देश तथा विदेशका करिब ४० खेलाडीले सहभागी जनाउनेछन् । एक जनामात्र बस्न मिल्ने डुंगा अर्थात कायकमार्फत खेलिने कायकिङ साहसिक खेल..
काठमाडौँ, १३ मंसिर । दक्षिण एशियाली फुटबल महासंघ (साफ)को आयोजनामा हुने साफ महिला पन्ध्र वर्षमुनि (यु–१५) फुटबल प्रतियोगिताको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले बंगलादेशको सामना गर्ने भएको छ । महासंघले आज सार्वजनिक गरेको खेल तालिकानुसार नेपालले बंगलादेशको ढाकास्थित वीरश्रेष्ठ शहीद सिपाही मोहम्मद मुस्ताफा कमल स्टेडियम कमलापुरमा आगामी पुस २ गते बंगलादेशसँग खेल्दै प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्नेछ । त्यसैगरी नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा पुस ४ गते..
इङ्लिस प्रिमियर लिगमा आज राति ४ खेल हुदै
काठमाडौं, मंसिर १३ । इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलअन्तर्गत आज राति ४ खेल हुँदैछ । लिग अन्तर्गतको आज राति हुने पहिलो खेलमा शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटी र साउथह्याम्पटन बीच प्रतिस्पर्धा हुने छ । आजै राति हुने दोस्रो खेलमा चेल्सीले स्वान्सी सिटीको सामना गर्नेछ भने तेस्रो खेलमा आर्सनलले हडस्फिल्ड टाउनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छ । त्यस्तै चौथो खेलमा स्टोक सिटी र लिभरपुल आमने सामने हुनेछन् ।..
डोपिङ काण्डमा मुछिएका थप ५ जना रुसी खेलाडिमाथि आजीवन प्रतिबन्ध
काठमाडौ १२ मंसिर । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिले डोपिङ काण्डमा मुछिएका थप ५ जना रुसी खेलाडीमाथि आजीवन प्रतिबन्ध लगाएको छ । रुसका डोपिङ काण्डबारे अनुसन्धान गरिरहेको कमिटिले थप ५ जनालाई ओलम्पिक प्रतियोगितामा आजीवन सहभागिता जनाउन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको हो । रुसी खेलाडीहरुले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनुअघि प्रतिबन्धित औषधी सेवन गरेको आरोप लागेपछि कमिटिले सन् २०१६ यता छानविन गरिरहेको छ । रुसी खेलाडीहरुले सन् २०११ देखि..
युएई विरुद्व खेल्ने नेपाली टोली घोषणा, टोलीमा शक्ति समावेश सुशील बाहिर
काठमाडौं मंसिर ११। वर्ल्ड क्रिकेट लिग (डब्लुसिएल) च्याम्पियनसिप अन्तर्गत युएई विरुद्ध डिसम्वरमा हुने अन्तिम चरणको दुई खेलका लागि पारस खड्काको कप्तानीमा १४ सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा गरिएको छ । आइसीसी प्रतिनिधि अमिनुल इस्लाम, राष्ट्रिय टिमका मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटा र कप्तान पारस खड्का सम्मिलित सेलेक्सन कमिटिले खेलाडी छनोट गरेको हो । राष्ट्रिय टिमका लागि दोस्रो चरणमा २० खेलाडीबाट अन्तिम टोली छनोट गरिएको नेपाली..
क्वालिफायरमा छनोट हुन नसकेको नेपाल हङकङलाई हराउँदै तेस्रो बन्न सफल
काठमाडौं मंसिर ११ । ग्लोबल क्वालिफायरमा छनोट हुन नसकेको नेपाल थाइल्याण्डमा जारी आइसीसी वुमन्स टी–२० वर्ल्डकप क्वालिफायर एसियामा तेस्रो स्थान हात पार्न सफल भएको छ । तेस्रो स्थानको लागि आज विहान भएको प्लेअफमा नेपालले हङकङलाई ३६ रनले पराजित गरेको हो । नेपाल र हङकङबीच लिग चरणको खेल वर्षाका कारण रद्द भएको थियो । बैंककस्थित टेर्डथाइ क्रिकेट ग्राउण्डमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले..
काठमाडौ १० मंसिर । इङ्गिलस प्रिमियर लिग फुटवलमा आज राति तीन खेल हुदै छ । आज राति हुने पहिलो खेलमा शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीले हडर्स्फिल्ड टाउनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । दोस्रो खेलमा बर्नालेले आर्सनलको सामना गर्नेछ भने तेस्रोमा साउथ ह्याम्पटन र एभर्टन आमने सामने हुनेछन् । यसअघि गएराति भएको खेलमा चेल्सी र लिभरपूल बराबरीमा रोकिएका छन् । गएराती सम्पन्न खेलमा दुवै टोलीले १–१..
आइसीसी महिला टी– २० विश्वकप छनोटमा नेपालद्वारा चीन ५० रनले पराजित
काठमाडौं मंसिर १० । थाइल्याण्डमा जारी आइसीसी महिला टी–२० विश्वकप एसिया छनोटको अन्तिम खेलमा नेपालले चीनलाई पराजित गरेको छ । आज विहान भएको खेलमा नेपालले चीनलाई ५० रनले पराजित गरेको हो । नेपालले चीनलाई पराजित गरे पनि अर्काे खेलमा युएईले मलेसियालाई पराजित गरेपछि नेपालको शीर्ष दुईमा रहदै ग्लोबल क्वालिफायरमा छनोट हुने सम्भावना भने सकिएको छ । नेपाललाई शीर्ष दुईमा पुग्न चीनलाई हराउनु पर्ने..
अग्नि रुपन्देही -११ लाई पछी पार्दै हुन्डाई मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब सेमिफाइनलमा
मंसिर १०, काठमाडौं । मेची नेत्रालय काँकडभिट्टा गोल्ड कप फुटबलअन्तर्गत हुन्डाई मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले अग्नि रुपन्देही -११ लाई सडन डेथमा पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा पुगेको छ । निर्धारित समय गोलरहित बराबरी भएपछि अन्तिम निर्णयका लागि टाइब्रेकर गरिएको थियो । टाइब्रेकरमा पनि ५–५ गोलको बराबरी भएपछि सडन डेथमार्फत हारजित निश्चित गरियो । मनाङका अनिल गुरुङ, विमल बस्नेत, सुजल श्रेष्ठ, हेमन गुरुङ, डोना थापा, विक्रम..
८ मंसिर, काठमाडौं । आइसीसी महिला टि-२० विश्वकप छनोट क्रिकेट अन्तर्गत एसियाली क्षेत्रको छनोट खेलमा नेपालले मलेसियालाई पराजित गरेको छ । आज शुक्रवार बैंककस्थित एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी मैदानमा भएको खेलमा नेपालले मलेसियालाई ३३ रनले पराजित गर्दै आफ्नो पहिलो जित हासिल गरेको हो । पहिले व्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ओभरमा ६ विकेटको क्षतिमा १ सय ८ रन बनाएको थियो । नेपालका लागि..
फिफा बरियतामा नेपाल ६ स्थान माथि उक्लन सफल
८ मंसिर, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल ६ स्थान माथि उक्लिएको छ। फिफाले बिहिबार जारी गरेको वरियता सूचीमा नेपाल १७० औं स्थानमा पुगेको हो । सार्क वरियतामा नेपालतेस्रो स्थानमा छ, नेपाललाई भारतले र माल्दिभ्सले पछि पारेका हुन् । सार्क क्षेत्रको पहिलो स्थानमा रहेको भारत वरियतामा १०५ औं स्थानमा छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको माल्दिभ्स १५७..
ट्वेन्टी–२० महिला विश्वकप : नेपाल युएईसँग ५ रनले पराजित
काठमाडौं, मंसिर ७ । थाइल्याण्डको बैंककमा जारी ट्वेन्टी–२० महिला विश्वकप क्रिकेट छनोट प्रतियोगिता अन्तर्गतको आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपाल संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)सँग पराजित भएको छ । एसिया क्षेत्रको छनोट प्रतियोगिता अन्तर्गत् बिहीबार भएको खेलमा नेपाल युएईसँग ५ रनले पराजित भएको हो । खेलमा युएईले प्रस्तुत् गरेको ८० रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले निर्धा्रित् २० ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै ७४ रनमात्र जोड्न सक्यो । योसँगै..
Results 1923: You are at page 62 of 65